गूगलमा होली खेल्ने हो ? यसरी खेल्नुस् ! - जनदिशा
tech बिज्ञान/प्रबिधि विज्ञान
गूगलमा होली खेल्ने हो ? यसरी खेल्नुस् !
Dipak Bhusal March 9, 2020	No Comments
रंगहरुको पर्व हो होली । यो पर्वलाई गूगलले स्मार्टफोन वा ल्यापटपबाट नै खेल्न मिल्ने बनाएको छ ।
कसरी खेल्ने भर्चुवल होली ?
कम्प्युटर अथावा स्मार्टफोनमा ‘holi’ सर्च गर्दा रिजल्टको दायाँतर्फ तीनवटा भाँडामा कलर राखिएको देखिन्छ । रंगले भरिएको उक्त भाँडोमा क्लिक गर्दा तपाईंले रंगिन लोला हिर्काए जस्तै रंग छरिएको देखिन्छ ।
त्यहाँ एकपटक क्लिक गरेर स्क्रिनको जुनुसुकै भागमा क्लिक तथा टच गर्दा रंग छरिन्छ । यसरी तपाईंले पुरै स्क्रिन भर विभिन्न रंगहरु छर्न सक्नुहुन्छ ।
होली खेलेपछि तपाईं आफ्नो फोनको स्क्रिन सफा पनि गर्न सक्नुहुन्छ । तेस्को लागि पानीको ड्रप आइकनमा ट्याप गर्नुपर्छ। यसले तपाईंको सर्च पेजको रंगहरू धोइने छ । के कुरा याद गर्नुपर्छ भने पानीको ड्रप आइकन आफै देखा पर्दछ ।
Previous Previous post: कोरोना सन्त्रास: कतारद्वारा नेपालसहित १४ मुलुकका यात्रुमाथि रोक
Next Next post: चीनमा कोरोना संक्रमण घट्यो : ९९.४ प्रतिशत उपचारपछि फिर्ता